> Resource > Beddelaan > Sida loo Encode MPEG Faylal ay la MPEG Encoder
Deji files MPEG waa hab ka mid ah diinta ama dib-u-Deji video files ka qaabab kale mid ka mid ah heerarka MPEG sida MPEG-1 iyo MPEG-2 iwm Dadka inta badan rabaan in ay encode MPEG gudbiyo inta badan ujeeddo ah qaybinta habboon ama archiving in CD / DVD. Si aad u samayn, a encoder MPEG awood leh oo si sahlan loo isticmaalo waa aalad qasban tahay inay leeyihiin software ah. Sidaas, MPEG qalab Deji waa in baahida weyn ee suuqa. Dato, waxaa jira wax badan oo encorders MPEG u isticmaala in ay ka soo xusho. Just sida ay baahidaada, ee ka dooro mid ugu haboon ee aad u.
Haddii aad jeclaan lahaa in la helo qalab sidan u weyn oo ay u abuuraan MPEG-1, MPEG-2 ama MPEG-4 files ka dhowaad kasta oo kale oo ah qaabab video oo caan ah, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa doorashada ugu fiican ee aad u. Waxa ay taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabab video aqbasho sida AVI, MKV, MOV, wmv, FLV, MTS, M2TS, TS, mod, ASF, 3GP, 3G2 iyo wixii la mid ah. Sidoo kale, waxay kuu ogolaanaysaa inaad encode files audio qaabab kala duwan, sida MP3, regelingen, WMA, AAC, FLAC, OGG, AIFF, MKA, M4R, AU, daanyeer iwm
Iyadoo Wondershare encoder MPEG, waxaad si fudud u encode kartaa video files in mid ka mid ah saddex files caadi MPEG, MPEG-1, MPEG-2, iyo MPEG-4. Wixii tayada wax soo saarka video, waxa ay u fiican, ku dhowaad aan khasaaro tayada wax. Iyo Furfuris sidoo kale waa mid aad u fudud. Just raac tilmaan-hoose.
1 videos Add to encoder MPEG ah
Mouse ka dhaqaaq dhinaca kore ee bidix ee interface hadda this MPEG Deji app ee, ka dibna riix badhanka waxaa xitaa video files on your computer iyo shuban kuwa aad rabto in aad encode. Si kale waa in ay doortaan jecel videos aad on your computer ugu horeysay, ka dibna si toos ah jiidi & dhibic soo xulay files deegaanka si ay taasi MPEG encoder ee Murayaad bidix. Ka dib markii in, dhammaan videos lagu soo bandhigi karaa thumbnail sida soo socota:
Tani encoder MPEG siinayaa MPEG-1, MPEG-2 iyo MPEG-4. Waxaad dooran kartaa qaabka wax soo saarka ah oo kaliya sida uu aad u baahan tahay. First of dhan, furo qaab saarka suuqa kala MPEG encoder ee adigoo gujinaya image qaab dhinaca midig ee ay interface hadda, soo socota, uu dedeg "qaab"> "Video" qaybta suuqa kala pop-up ah, iyo ugu dambaysta, dooran "MPEG-1" ama "MPEG-2" ama "MP4 Video" (ie MPEG-4).
Haddii aad u baahan tahay si ay ula qabsadaan qaar ka mid ah koobin video Deji, waxaad sii wadi kartaa in la garaaco button qalabka-sida "Settings" ee hoose ee guddiga Qaabka wax soo saarka. Daaqadda pop-up Dejinta ah, dhigay xalka video, heerka jir video, iyo video & heerka yara audio iwm
3 files Encode MPEG
In tallaabadii u dambaysay, oo kaliya ku dhufatey "Beddelaan" button rukun ee hoose-saxda ah ee interface ugu weyn this MPEG encoder ayaa si ay u bilaabaan Deji files MPEG ka qaabab kale. Isla markiiba, waxaad ka arki kartaa heerka dhammaystirka video kasta oo horyaalka ah. app Tani waxay ku dhamaysan karaan dhamaan hawlaha qaab beddelidda, xawaare fantastik ah.
Kadib markii geedi socodka Deji MPEG waxaa loo sameeyaa, kaliya riix "Folder Open" badhanka hoose ee interface hadda barnaamijkan ayaa si aad u ogaato faylasha wax soo saarka. Ogow in haddii aad dooratay MPEG-1 ama MPEG-2, files wax soo saarka ayaa noqonaya kuwa la kordhiyo .mpg, halka wax soo saarka MP4, faylasha la gediyay ayaa noqonaya kuwa la .mp4 magaca dheeraad ah.